Kungani uNkulunkulu esebenzisa izimangaliso kancane kangaka? - Mytika Speak
Ikhaya / UNkulunkulu Nokwamoya / Kungani uNkulunkulu esebenzisa izimangaliso kancane kangaka?
Izimangaliso zenzeka njalo kepha zithathwa kalula futhi zithathwa njengokuqondana kwezinto. Ayikho into efana nokuqondana nje futhi yonke impilo iyisimangaliso.
Ngezikhathi emlandweni lapho impilo yayingenazo iziphazamiso eziningi, yonke imiphakathi yayibaqaphela kakhulu Okwangempela. Lokhu kubenze bakwazi ukubona izehlakalo njengezimangaliso kaningi.
Uma uthatha isikhashana ukubona ukuthi kunoma yiluphi usuku olunikeziwe:
Uyakwazi ukuphefumula, sibonga umoya onenhlanganisela yawo eqondile yezakhi.
Ufudumele futhi uyabona emini, ngenxa yelanga elikukhanyisela imisebe yalo lisendaweni eqondile.
Ukhanyiswa ebumnyameni ebusuku, ngenxa yenyanga esendaweni yayo efanele ukukhombisa ukukhanya kwelanga.
Uhlu alupheli futhi luyanda ngokungenamkhawulo.
Amathegiukuqonda uNkulunkulu izimangaliso ukukhula komuntu siqu ingokomoya